Ndị Hibru 6 Baịbụl Nsụgharị Ụwa Ọhụrụ nke Dị n'Ịntanet
Akwụkwọ Ozi E Degaara Ndị Hibru 6:1-20
Ka anyị na-eme nke ọma ruo mgbe anyị tozuru etozu (1-3)
Ndị na-adapụ n’okwukwe na-akpọgide Jizọs n’osisi ọzọ (4-8)
Ka obi sie unu ike na unu ga-enweta ihe unu na-atụ anya ya (9-12)
Anyị ji n’aka na Chineke ga-emezu nkwa ya (13-20)
Nkwa Chineke na iyi ọ ṅụrụ anaghị agbanwe agbanwe (17, 18)
6 N’ihi ya, ebe anyị mụtarala ihe ndị mbụ a kụziiri anyị+ banyere Kraịst, ka anyị jisie ike na-eme nke ọma ruo mgbe anyị tozuru etozu.+ Ka anyị ghara ịlaghachi azụ mụwa ihe ndị mbụ a kụziiri anyị,* ya bụ, ịmụ banyere isi n’ọrụ na-abaghị uru* chegharịa, inwe okwukwe na Chineke, 2 ụdị baptizim dị iche iche, ibikwasị mmadụ aka n’isi,+ ịkpọlite ndị nwụrụ anwụ n’ọnwụ,+ nakwa ihe Chineke kpebiri nke ga-adịru mgbe ebighị ebi. 3 Anyị ga-etozu etozu ma ọ bụrụ uche Chineke. 4 N’ihi na ndị e merela ka ha ghọta eziokwu,+ ndị detụrụ onyinye si n’eluigwe e nyere n’efu ire, ndị nwetarala mmụọ nsọ, 5 ndị detụrụ okwu Chineke nke dị ezigbo mma ire, detụkwa ihe ọma ndị ga-eme n’ọdịnihu ire,* 6 ma ha adapụ n’okwukwe,+ e nweghị ike ime ka ha chegharịa ọzọ n’ihi na ha na-akpọgide Ọkpara Chineke n’osisi ọzọ ma na-eme ka ihere mee ya n’ihu ọha.+ 7 Chineke na-eji mmiri na-ezo ugboro ugboro agọzi ala n’ihi na ala na-amịrị mmiri ozuzo ma puoro ndị kọrọ ihe na ya ihe ha kọrọ. 8 Ma, o puo ogwu na uke, e nweghịzi ihe a na-eji ya eme. Obere oge a ga-abụ ya ọnụ. E mechaakwa, a ga-esu ya ọkụ. 9 Ma unu ndị anyị hụrụ n’anya, obi siri anyị ike na unu ka ndị dapụrụ n’okwukwe mma, unu na-emekwa ihe ga-eme ka a zọpụta unu, n’agbanyeghị na anyị na-ekwu ihe a. 10 N’ihi na Chineke abụghị onye ajọ omume. Ọ gaghị echefu ọrụ unu na otú unu si gosi na unu ji aha ya kpọrọ ihe*+ n’ihi na unu jeere ndị nsọ ozi ma ka na-ejere ha ozi. 11 Ma anyị chọrọ ka onye ọ bụla n’ime unu na-arụsi ọrụ ike otú ahụ, ka obi wee sie unu ike ruo ọgwụgwụ+ na unu ga-enweta ihe unu na-atụ anya ya.+ 12 Anyị achọghị ka unu dịrị umengwụ,+ kama na-emenụ ka ndị ahụ, bụ́ ndị okwukwe ha na ndidi ha mere ka e kwe ha nkwa. 13 N’ihi na mgbe Chineke kwere Ebreham nkwa, o ji onwe ya ṅụọ iyi+ ebe ọ bụ na e nweghị onye ka yanwa. 14 Ọ sịrị: “N’eziokwu, m ga-agọzi gị. N’eziokwu, m ga-eme ka ị dị ọtụtụ.”+ 15 Ọ bụ mgbe Ebreham nwechara ndidi ka e kwere ya nkwa a. 16 Ndị mmadụ na-eji onye ka ha aṅụ iyi, iyi ha na-aṅụ na-emekwa ka esemokwu bie n’ihi na ọ na-egosi na ihe ha kwuru bụ eziokwu.+ 17 Chineke mekwara ihe yiri ya. Mgbe o kpebiri ime ka o dokwuo ndị ga-eso nweta ihe ahụ e kwere ná nkwa+ anya na nzube ya* anaghị agbanwe agbanwe, ọ ṅụrụ iyi wee gosi na ihe o kwuru bụ eziokwu. 18 Ihe abụọ a Chineke mere* anaghị agbanwe agbanwe, Chineke emekataghịkwa ghaa ụgha.+ Ihe ndị a na-eme ka obi sie anyịnwa ndị gbabara n’ime ya ike, ka anyị wee ghara ịkwụsị inwe olileanya anyị nwere. 19 Olileanya a anyị nwere+ ji ndụ* anyị otú nko e ji ejide ụgbọ mmiri* si ejide ụgbọ mmiri. O siri ike, e jikwa ya n’aka. Ọ na-edu anyị agafe ákwà mgbochi ahụ,+ 20 nke onye bu anyị ụzọ gaferela n’ihi anyị, ya bụ, Jizọs,+ onye ghọrọ nnukwu onye nchụàjà dị ka Melkizedek, ọ ga-abụkwa onye nchụàjà ruo mgbe ebighị ebi.+
^ Na Grik, “ghara ibidokwa n’isi tọwa ntọala.”
^ Na Grik, “n’ọrụ nwụrụ anwụ.”
^ Na Grik, “detụkwa ike nke usoro ihe na-abịa abịa ire.” Gụọ Nkọwa Okwu, “Oge a.”
^ Ma ọ bụ “otú unu si gosi na unu hụrụ aha ya n’anya.”
^ Ma ọ bụ “ihe o kpebiri ime.”
^ Ya bụ, nkwa o kwere na iyi ọ ṅụrụ.
^ Ma ọ bụ “otú arịlịka.”
Ndị Hibru 6